दक्षिण एसियाकै पहिलो र एक मात्र बाइक नेपालमा, मूल्य ७४ लाख ! | Kendrabindu Nepal Online News
दक्षिण एसियाकै पहिलो र एक मात्र बाइक नेपालमा, मूल्य ७४ लाख !
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १७:१०
नाडा अटो शोमा नयाँ नयाँ सवारीसाधनहरु सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। यसै क्रममा बिहिबार दक्षिण एसियाकै पहिलो र एक मात्र बाइक सार्वजनिक गरिएको छ। एमभी अगस्टाको एक्सक्लुसिभ बाइक ब्रुटाले ८०० आरआर एलएच ४४ लन्च भएको हो । कम्पनीले यसको मूल्य ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली नेकेड स्पोर्ट्स बाइक मध्ये एमभी अगस्टाको यो बाइक पनि एक हो । यसले १४० हर्सपावर र ८७ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो बाइकमा कार्वन फाइबर कम्पोनेन्ट र मेसिन्ड बिलेट कन्ट्रोलको प्रयोग गरिएको छ । यसमा लिक्विड र आयल रेडिएटर कुलिङ प्रयोग पनि गरिएको छ ।
३ वटा सिलिन्डर रहेको उक्त बाइकमा फोर स्ट्रोक र १२ भल्भ छ । ७९८ सीसी क्षमता रहेको यस बाइकको लम्बाई २०४५ एमएम, चौडाई ८७५ एमएम र स्याडल हाइट ८३० एमएम छ । यसमा १३५ एमएमको न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ। यो बाइक विश्वभर १ सय ४४ युनिट मात्र उपलब्ध छ ।
Prevआईएमएस मोटर्सको अफर नै अफर, ६ मोडेलका गाडी सार्वजनिक
सुजुकीले ल्यायो ‘पर्वोत्सव योजना’Next